sida loo kiciyo ama loo joojiyo makiinada wax lagu garaaco macruufka 13
Ugu Weyn Ee Wararka & Dib U Eegista Sida loo sahlo ama loo joojiyo makiinada wax lagu garaaco macruufka 13
Sida loo sahlo ama loo joojiyo makiinada wax lagu garaaco macruufka 13
Haye, maxaad ka ogtahay - garaacista qoraalka hadda waa wax ku jira iphone! Haa, Apple waligiis kuma weyneyn bedelida habka kumbuyuutarkiisu u shaqeeyo - waxay qaadatay illaa iOS illaa 8 shirkadda si ay ugu oggolaato in kumbuyuutarrada saddexaad ee xisbiga lagu rakibo. Iyo xitaa markaa, isticmaaleyaal badan ayaa doorbiday inay ku dhagaan kumbuyuutarka asalka ah ee macruufka maxaa yeelay si wanaagsan ayey isugu dhafan yihiin iyo sababta oo ah waxay leedahay xakamaynta tilmaanta tilmaanta aad u habboon.
Hagaag, farax, maxaa yeelay uma baahnid inaad u kala baxdaa inaad haysato xakamaynta tilmaamaha ama kumbuyuutar nooca loo yaqaan 'swipe keyboard' mar dambe - iOS 13, Apple waxay soo bandhigtay wax loogu yeero 'Slide to Type'. Asal ahaan, waxay u shaqeysaa sida kumbuyuutarkii hore ee Swype oo gadaal gadaal ka ahaa 2013 - fartaada ayaad ku wareejineysaa kumbuyuutarka, adoo hubinaya inaad ku dhex marto dhammaan xarfaha aad dooneysay inaad garaacdo, AI-na wuxuu si muuqata u muujinayaa erayga aad isku dayayso inaad qorto . Waxay ka dhigeysaa hal gacan ku qorid wax badan, aadna u fudud, waana sababta habkani u leeyahay taageerayaal aad u tiro badan.
Muuqaalka - Apple wuxuu ugu yeeraa 'Slide to Type' - waa la kartiyeeyaa markii hore. Haddii aad raadineyso inaad gabeyso ama aad dib u awoodsiiso, waa kan meesha aad ka heli karto toggga:
Gal Gudaha -> Guud -> Kiiboodhka. Raadi 'Slide to Type' toggle meel u dhow salka dushiisa ama daar / shid, taas oo ku xidhan dookhaaga.
Waxaa xusid mudan in Slide to Type uusan taageerin luqadaha oo dhan, ugu yaraan wali. Marka, haddii aadan ku hadlin Ingiriisiga hooyo, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad ku raaxeysato muuqaalka cusub markaad ku hadlaysid afkaaga.
loop vs halka loop Python
Android L: si qoto dheer u fiiri Google cusbooneysiinti ugu dambeysay ee Android & apos;
Ma ogtahay waxa 'S' ee Samsung & apos; s Galaxy S line u taagan yahay? Jawaabtu waa super cheesy
Wadaagista koontada Disney + ayaa loo oggol yahay xilligan, kaliya ha ku xadgudbin
Qaar ka mid ah noocyada Apple iPhone 6s iyo iPhone 6s Plus ayaa u qalma dayactir bilaash ah
Microsoft Remote Desktop ee iPhone iyo iPad wuxuu helayaa cusbooneysiin muddo dheer la sugayay, jiirka iyo taageerada trackpad
Samsung Gear S2 vs Apple Watch: aragtida koowaad
iPhone 13 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max: waxa aan ognahay illaa hadda
Samsung Gear S2 Classic 3G ayaa maanta bilaabaya AT&T, T-Mobile, iyo Verizon
Soo qaado tan oo orbs oo bilaash ah oo ciyaaraya Halyeeyada Astaanta Difaaca toddobaadkan; dhacdo gaar ah ayaa ku dareysa baaritaanno iyo khariidado cusub
T-Mobile vs AT&T iyo Verizon 5G oo aan xadidneyn ayaa qorsheynaya isbarbar dhiga qiimaha